နေ့တိုင်းအကြောင်းကို 780 000 လူဦးယေရှုကိုယု&
ဘယ်တော့မှမမတိုင်မှီသမိုင်း၌ဤမျှလောက်များစွာသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသိမ်းဆည်းပြီးပြီ။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသီးနှံအတွက် salvaged အခြိနျတှငျနထေိုငျ!
အတော်များများကကျနော်တို့ရဲ့အချိန်အကြီးအစွန့်ပစ်မှုအတွက်အလုပ်များစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ သူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြန်လည်ရှင်သန်မှု, လုံးဝဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများကို: ဤတစ် generalfel ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီး၌ကြီးစွာသောပြန်လည်အခုအချိန်မှာအဲဒီမှာပါ! သမိုင်းထဲမှာမတိုင်မီဤမျှလောက်များစွာသောယခုပင်ဖြစ်၏အဖြစ်သိမ်းဆည်းခဲ့ကြဘူး။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖွင့် 780 000 လူဦးသညျယရှေုကိုလက်မခံနှင့်မြေကြီးပတ်ပတ်လည်နေ့တိုင်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်!
သေချာတာပေါ့, ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေနေ့တိုင်းဘုရားသခငျ၏နိုငျငံတျောသို့လာငါတို့အကြောင်းကိုသိသော, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစွန့်ပစ်အောက်မှာလည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပြူးကြည့်မရမျက်စိကန်းစွန့်ပစ်, ဒါပေမယ့်ရွှင်လန်းလုပ်ပါ။ တခါတလေငါကယေရှုရဲ့အချိန်တမန်တော်စဉ်းစားထဲမှာကျွန်တော်ယခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဒီသမိုင်းဝင်အချိန်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လတံ့သောယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမနာလိုဖြစ်ကြသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသီးနှံအတွက် salvaged အခါအချိန်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်အဖြစ်ဘယ်တော့မှမမတိုင်မှီသမိုင်း၌ဤမျှလောက်များစွာသောကမ္ဘာတဝှမ်းသိမ်းဆည်းပြီးပြီ။ နေ့တိုင်းအကြောင်းကို 780 000 လူဦးယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းပါ!
ငါတို့သည်ဤလောကအတွက် 2.5 ဘီလီယံခန့်ရစျယာနျအကြောင်းကိုရှိပါတယ်ယနေ့မျှော်လင့်ထား။
ဤအရာ 70% 1.75 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအောင်, အ 1900 စဉ်အတွင်းသတိယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမှလာကြပြီ။
ဤအရာတို့ကို 1.75 ဘီလီယံ 70% ဘီလီယံအထိ 1.2 အကြောင်းကိုဆိုလိုသည်, 1945 ပြီးမှ, ယုံကြည်ခြင်းအားထံသို့လာကြ၏။
ဤအရာ, 1945 အပြီးယုံကြည်သောသူ 1.2 ဘီလီယံ 70% သည်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်းယုံကြည်သည်။
အကြောင်းကို 857 သန်းကနောက်ဆုံးသုံးနှစ်ကယုံကြည်သည်သောဤနည်းလမ်းများ။
အကြောင်းကို 285 သန်းလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်အတွင်းအသီးအသီးယုံကြည်သည်နှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်မှုကိုဆက်လက်သောဤနည်းလမ်းများ။
ရင်းမြစ်: Facebook က - Nils ကို Gunnar Lönnegren
780 000 နေ့စဉ်နေ့တိုင်း
ငါရာစု၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်မှုနှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျှင် 285 သန်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဒါတွေအကြောင်းပါလိမ့်မည်:
780 000 နေ့ရက်တိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်
Vecka 31, måndag2augusti 2021 kl. 17:28